कामबाट घर फर्किदै थिए मजदुर, पछाडिबाट मोटरसाइले ठक्कर दिदा ६ घाइते, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
कामबाट घर फर्किदै थिए मजदुर, पछाडिबाट मोटरसाइले ठक्कर दिदा ६ घाइते
कञ्चनपुर । कृष्णपुर–५ लालझाडी जङ्गलको अमखौया खोला नजिक पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा गए राति मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा ६ मजदुरसहित सात जना घाइते भएका छन्।
घाइतेको अत्तरियास्थित पद्मा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घाइते मोटरसाइकल चालक राजेन्द्र पालको बाँकेको कोहलपुरस्थित मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ।